Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Tag | Political Prisoners
Posted on June 7, 2016 by freeburma
မန္တလေးမြို့တွင် ဆန္ဒပြ ပွဲကို တားဆီးထိန်းသိမ်းသော ရဲ ဒုတပ်ကြပ်ကိုလက်သီးဖြင့် ထိုး၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည်ဟုဆိုကာ ဘီဘီစီသတင်း ထောက် ကိုနေမျိုးလင်းအား အ လုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်သုံးလချမှတ် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၂၀၁၅ မတ်လ ၂၇ ရက်က ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင် အမျိုး သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒပြသော ကျောင်းသားများနှင့် ၀န်းရံပြည်သူများ ပြန်လည်လွတ် မြောက်ရေးအတွက် ကျောင်းသား များက ဆန္ဒပြနေစဉ် ကျောင်းသား ၏ ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းလှဲခဲ့သော ရဲ ဒုတပ်ကြပ်ကို ဘီဘီစီသတင်း ထောက်ကိုနေမျိုးလင်းက ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိအောင် လက်သီးဖြင့် ထိုးခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၂ ဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် သုံးလချမှတ်ခဲ့ကြောင်း မြို့နယ် တရားသူကြီးက ပြောသည်။
‘‘သက်သေခံအထောက်အ ထားတွေအရ အပြစ်ရှိတယ်လို့သုံး သပ်တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ်ချ မှတ်ခဲ့တာပါ။ ကျန်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ ဖိအားပေးခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို တာ ၀န်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာ ဒီလို လက်သီးနဲ့ထိုးတာက ကျန်တဲ့ဝန် ထမ်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ် ကိုင်ကြတော့မလဲ။ ၀န်ထမ်းတစ် ဦးကမလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စ မှာ ပုဒ်မ ၃၃၂ နဲ့ အကာအကွယ် ပေးတာပါ။ တကယ်လို့ တရားမမျှ တဘူးဆိုရင်လည်း တရားခံဘက် က အယူခံတက်လို့ ရပါတယ်’’ဟု မြို့နယ်တရားသူကြီးက ပြောသည်။
အဆိုပါ အမှုကို ချမ်းမြသာ စည်မြို့နယ် အမှတ်(၁၁)နယ်မြေ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး တရားခံပြသက်သေ ၂၀ ဦးကို စစ် ဆေးခဲ့ကာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့် ခဲ့ကြောင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တရားရုံးမှ သိရသည်။
‘‘ရဲကျင့်ဝတ်အရ ဘယ်နေရာ မှာမဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ် ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဆန္ဒပြတာကို ဥပဒေမဲ့ဆိုင်ကယ်ကို ဆွဲလှည့် လိုက်တယ်ဆိုတာ အများလည်း မြင်ပါတယ်။ ဒီဟာကို မျက်ကွယ် ပြုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၂ နဲ့ တရားစွဲပြီး ထောင်ချလိုက် တာ လုံးဝမတရားပါဘူး။ နောက် တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာ တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အ စည်း မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။ အခုလို ဖြစ်ရတာက ကိုယ့်ရှေ့မှာ ပြည်သူတစ်ယောက်ကို မတရား ကျူးလွန်တာကို အကာအကွယ် ပေးတဲ့သဘောပါ။ ရဲကိုနာပါစေ ဆိုပြီး လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါ ဘူး’’ဟု ကိုနေမျိုးလင်းက ပြော သည်။
via7Days News http://ift.tt/1t66u2Q http://ift.tt/1Vus636
Posted in Political Prisoners, Press	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Press	| Leaveacomment |
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/1td3XEI http://ift.tt/Tf1V41
Posted on April 11, 2016 by freeburma
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွှယ်ပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေကြရသူ ၁၉၉ ဦး လွှတ်ပေးခဲ့
via Myanmar President Office http://ift.tt/20tQWBj http://ift.tt/1V0lSqx
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Recently Read	| Leaveacomment |
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေကြရသူ (၁၉၉)ဦးလွှတ်ပေးခဲ့
via moi http://ift.tt/1RXxqI6 http://ift.tt/1KnLGaX
Posted on April 7, 2016 by freeburma
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်လွှတ်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ကျောင်းသားများအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် နည်းလမ်း ၃ ရပ်နဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်[…]
The post နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်လွှတ်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော appeared first on DVB.
via DVB http://ift.tt/1qwHGQY http://burmese.dvb.no
ကျောင်းသားတွေ လွှတ်ပေးရေး ဦးသိန်းညွန့်တင်ပြချက် ပြည် ထဲရေး ငြင်းဆို
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ ဝန်းရံ သူတွေကို စွဲဆိုထားနဲ့ အမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပြီး လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာ ခွင့်ပေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအတွင်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာကို ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကစာနဲ့အကြောင်းပြန် ကြားရာမှာ အဲဒီအမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းလို့မရကြောင်း ငြင်းဆို ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Q5P0rt http://www.rfa.org
Posted on December 13, 2015 by freeburma
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီနဲ့ လက်ရှိအစိုးရကြား အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ အလွှဲအပြောင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကာလမှာ လက်ရှိဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်နေတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတဝှမ်း အကျဉ်းထောင်တွေထဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ လက်ရှိ ပုဒ်မအမျိုးမျိုးနဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ လွတ်မြောက်ရေး…
via Voice of America http://ift.tt/1P0R5r3 http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Election - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ	| Tagged Election, Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted on November 18, 2015 by freeburma
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ် ကျေးရွာ ၁၁ ရွာမှာ သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် ဆန္ဒပြတောင်း ဆိုခဲ့ကြတဲ့ ၈၈ ကရင်မျိုးဆက် ကျောင်းသားအစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးနဲ့ လယ်သမား ၇ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးကို တရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုနဲ့ ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံးက ဒီနေ့ ထောင်ဒဏ် ၂ လစီ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1NE0d1w http://www.rfa.org
Posted on November 12, 2015 by freeburma
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေ တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် စိုးရိမ်မိ တာကြောင့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကိုအောင်မှိုင်းဆန်း အပါအဝင် ထိန်းသိမ်းခံကျောင်းသားတွေ ကိုသပိတ်လှန်ဖို့ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေး က မနေ့က တွေ့ဆုံမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1Y5DP8M http://www.rfa.org
Posted in Political Prisoners, Protests, Recently Read	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Protests, Recently Read	| Leaveacomment |
အကျဉ်းထောင်တွင်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကျောင်းသားတချို့ ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရ
"ကိုဖြိုးဓနချစ်လင်းသိုက်က ၀မ်းအမဲတွေ သွားတယ်ပေါ့နော်။ သူက အစာအိမ်ရောဂါလည်းရှိတယ်။ အစာအိမ် သွေးကြောပေါက်တာလို့ ကျနော်တို့ကတော့ ယူဆတယ်"
via Voice of America http://ift.tt/1MLnzRX http://ift.tt/Tf1V41
Posted on October 23, 2015 by freeburma
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင် ခင် ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဗကသ ကျောင်း သားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်မှိုင်းဆန်းက ထောင်တွင်းမှာ ဒီနေ့ကစပြီး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1GndSgd http://www.rfa.org
Posted on October 21, 2015 by freeburma
ထိန်းသိမ်းခံကျောင်းသား တစ်ဝက် နီးပါးကြိုတင်မဲပေးဖို့ ငြင်းဆန်
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူနဲ့ ဝန်းရံသူ ၅၄ ဦးထဲက တစ်ဝက်လောက် က ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲပေးမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်က ကြိုတင်မဲပေးဖို့ ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1koXnq8 http://www.rfa.org
Posted on October 15, 2015 by freeburma
သာယာဝတီမြို့နယ် တရားရုံးကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်အတွင်း တားမြစ်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းယာတွေ ယူဆောင်တာကြောင့်ဆိုပြီး တားမြစ်ပစ္စည်းသွင်းယူမှု ပုဒ်မ ၄၂ နဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ဝန်းရံသူ ၇ ဦးကို သာယာဝတီမြို့နယ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ လကျခံဖို့ ဒီကနေ့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။
ချုပ်ရက်တွေကို ထည့်သွင်းခံစားစေဆိုပြီး တရားသူကြီးက အမိန့်ချလိုက်တဲ့အတွက် ချုပ်ရက်က ၃ လ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1LcvIkV http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on August 22, 2015 by freeburma
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိရန် အာမခံလျှောက် ထားမှုကို သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် အမရပူရမြို့နယ် တရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားများ ကအကျဉ်းထောင်ထဲတွင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသွားမည်ဟု ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနိုင်ရဲဝေ က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံထားရသော ကျောင်းသားများသည် ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်ရှေ့တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်က ဒီမိုကရေစီ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကျောင်းရှေ့နံရံများနှင့် မုခ်ဦးများတွင် အစိုးရ ဆန့်ကျင်သောစာများကို မှုတ်ဆေးများနှင့် ရေးသား ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ကိုနိုင်ရဲဝေ၊ ကိုဂျစ်တူး၊ ကိုဉာဏ်လင်းထက်၊ ကိုအောင်ဆန်းဦးတို့ကို အမရပူရမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပုဒ်မ ၁၄၄၊ ၁၄၃၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ်မ ၁၈ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီး ထားခြင်း ဖြစ်ကာ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၂ ရက်တွင် ဒုတိယရုံးချိန်းနှင့် သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် တတိယရုံးချိန်းအဖြစ် စစ်ဆေး ခဲ့ရာ ထိုနေ့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အာမခံ လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် အာမခံလျှောက် ထားခြင်းကို မြို့နယ်တရားရုံးက ပယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုနိုင်ရဲဝေက “တရားဥပဒေအထက်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကို စာမေးပွဲဖြေဖို့ အာမခံမပေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသွားမယ် ” ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ကိုနိုင်ရဲဝေက “ ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်အတွက် စာမေးပွဲဖြေချင်တယ်။ လက်ပံတန်းမှာ အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေ အာမခံရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိတက်နေ တဲ့ဒေးကျောင်းသားတွေ ကျတော့ အာမခံမရဘူး။ ဥပဒေက တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ မတူလို့တော့ မရပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း အမရပူရ မြို့နယ် တရားသူကြီးကမူ ၎င်းတို့အား ဖမ်းဆီးထားသည့် ပုဒ်မများတွင် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) ပါနေသောကြောင့် အာမခံပေး၍ မရဟု ဆိုသည်။ အမရပူရမြို့နယ် တရားသူကြီးက “ အဲဒီပုဒ်မ ပါရဲ့သားနဲ့ အာမခံပေးလိုက်ရင် နောက်လူ တွေလည်း ပေးရတော့မယ်။ နောက်တစ်ချက်က သူတို့စာမေးဖြေဖို့ စာတင်တာမှာ ကျောင်းက ထောက်ခံပေးထားတာ ဘာမှမပါဘူး။ ဒါကြောင့် အာမခံ မရတာပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါဖမ်းဆီးခံထားရသော ကျောင်းသား ၄ ဦး အာမခံရရှိရေးနှင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိရန် တောင်းဆိုပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုတက မဇ္ဈိမကိုပြော သည်။
၎င်းက “ သာယာဝတီမှာလည်း အာမခံရတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း အာမခံရတယ်။ တရားရေး မဏ္ဍိုင်မှာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး။ ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီအာမခံက သက်သေပဲ။ တရားရုံးက လုံးဝ အာမခံ မပေးတော့ဘူးဆိုရင် ထောင်အတွင်းမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ပေးရပါမယ်။ သူတို့က အမှုရင်ဆိုင်တုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ထောင်မကျသေးဘူး။ ဒါကြောင့် တရားရုံးအနေနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ဖြေဆိုခွင့် ပေးရမှာပါ” ဟု ဦးသုတ က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခံရသော ကျောင်းသား လေးဦးကို သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် လေးကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/1hzqWEh http://ift.tt/1nfHMox
Posted on August 21, 2015 by freeburma
အစိုးရနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်တို့အဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး ၈၈ ကရင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ စောမောင်ကြီးကို မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှု[…]
The post ၈၈ ကရင်​မျိုးဆက်​​ကျောင်းသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌကို တရားစွဲ ရုံးထုတ် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1PEyEYP http://burmese.dvb.no
Posted on August 20, 2015 by freeburma
ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲအပြီး ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံကြရတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ပုဒ်မ ၁၈[…]
The post ကိုနေမျိုးဇင်နှင့် နော်အုန်းလှတို့ကို ယနေ့ အမိန့်ချမှတ်မည် (ဓာတ်ပုံ) appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1PnzsAs http://burmese.dvb.no
Posted on August 19, 2015 by freeburma
နိုင်ငံတော်အစိုးရများမှ အကျဉ်းထောင်များတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဟု ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံအနှံ့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁၉ ဦးနှင့် နိုင်ငံရေးပုဒ်မဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ၄၆၁ ဦး ရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးထွန်းကြည်က ပြောသည်။ နိုင်ငံသားတန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ပံ့ပိုးရန်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကို ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးရန် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၆ ရက်က နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် လွှတ်တော်သုံးရပ်ကို အကြောင်းစာပို့ထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ “တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၁၉ ဦး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိပြီး၊ တရားရုံးတွေမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ၄၆၁ ဦး ရှိတယ်”ဟု လက်ရှိအကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် အကျဉ်းချခံထားရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် […]
via Myanmar Electoral Resource and Information Network http://ift.tt/1JgQN9G http://ift.tt/1Ov7XVN
Posted on July 30, 2015 by freeburma
သမ္မတက အကျဉ်းသား ၇ ထောင်နီးပါးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ဒီကနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးရာမှာ ဘိုင်မွန်းတည့်နေဂျာနယ် သတင်းသမား ၅[…]
The post ဘိုင်မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် သတင်းသမား ၅ ဦး လွတ်မြောက် appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1LTug7Q http://burmese.dvb.no
Posted in Political Prisoners, Press, Recently Read	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Prisoners, Press, Recently Read	| Leaveacomment |